Okufanayo: Content Scrapers. Indlela yokuthola ukuthi ubani othayipha okuqukethwe kwakho
Uma ungumblogger noma umlobi wokuqukethwe, amathuba konke okuphathelene nama-scrapers wokuqukethwe. Qaphela ukuthi ama-scrapers wokuqukethwe angakopisha noma abambe okuqukethwe kwakho kuwebhu kubhulogi abo abazimele ngaphandle kwemvume. Ezinye ze-scrapers zokuqukethwe zivele zikopishe futhi zinamathisele okuthunyelwe kwebhulogi yakho ngaso sonke isikhathi, kuyilapho abanye basebenzisa izinhlelo ezenzakalelayo zokuthatha okuqukethwe okuvela kwi-RSS feeds bese beyishicilela kumawebhusayithi abo. Lapha sizochaza indlela yokuthola ukuthi ngubani oba okuqukethwe kwakho kuwebhu nokuthi yiziphi izinyathelo okufanele uziphathe ngazo.
Indlela yokuthola ukuthi isayithi lakho liyadutshulwa:
Ngaphandle kokuthi ungafune isihloko sakho sokuthunyelwe ku-Yahoo, Bing noma i-Google, awukwazi ukulandelela phansi amawebhusayithi atshisa okuqukethwe kwakho njalo. Uma ubheka ukwazi ngalabo ama-spam amalunga noma abaduni, ungazama noma iyiphi yalezi zindlela ezilandelayo - where to order dilaudid (hydromorphone) 4 mg tablet online.
Yindlela elula futhi elula yokuthola obamba okuqukethwe kwakho kwi-intanethi. Lolu hlelo likuvumela ukuba ufake ama-URL wezinto zakho zewebhu bese uthola amakhophi alo kuWebhu Lomhlaba Wonke. Ungasebenzisa inguqulo yaso yamahhala ngezinketho ezilinganiselwe noma inguqulo ye-premium evumela ukuthi uhlole amakhasi angama-10 000 wewebhu ngamabhakede ambalwa.
2. Izindlela zokulandelela:
Ungazama futhi ukulandelela kwe-WordPress site yakho ukuze ubone futhi uqhekeze amasayithi abamba okuqukethwe kwakho cishe nsuku zonke. Uma usebenzisa i-Akismet, eziningi ze-trackbacks zizoboniswa kufolda yakho yogaxekile. Isihluthulelo sokukhomba nokuthola ithrekhi yomzila wethrekhi kufaka phakathi izixhumanisi zokuthunyelwe kwakho ngemibhalo emikhulu ye-anchor. Ukuxhumanisa ngaphakathi nangaphandle kubalulekile ekuthuthukiseni isayithi lakho.
3. Amanye ama-Webmaster Tools:
Enye indlela yokuthola ama-scrapers wokuqukethwe usebenzisa ama-Webmaster Tools. Yiya kuWebhu> Izixhumanisi ze-akhawunti yakho ye-Google Analytics bese uchofoza kukholomu le-Linked. Noma yiliphi iwebhusayithi exhumanise okuthunyelwe kwakho izoboniswa kule ndawo. Ukuthola izixhumanisi zakho kuleli sayithi, kufanele uchofoze esizindeni bese uthole imininingwane yimuphi ama-athikili wewebhusayithi yakho eyebiwe kude kangaka. Lapha uzokwazi ukubona ukuthi ngokucophelela bakopisha futhi badlulisela kanjani izihloko zakho zokuthunyelwe kanye nokuqukethwe nsuku zonke.
4. Izaziso ze-Google:
Uma ungazange uthumele njalo futhi ufuna ukuqhubeka nanoma yikuphi okushiwo okuthunyelwe kwakho kwebhulogi noma ama-athikili kwamanye amasayithi, kufanele udale izixwayiso ze-Google usebenzisa ukufana okunembile kwezihloko zakho zezihloko ukufaka emamaki okucaphuna.
Thola Ikhredithi ye-Post Scraped:
Uma udale isayithi le-WordPress, kufanele uzame i-plugin ye-RSS footer. Ivumela abasebenzisi ukubeka izicucu zombhalo wakho ngezansi noma ngaphezulu kokuqukethwe kwe-RSS feed. Futhi uma ungenayo isayithi le-WordPress, kufanele uvele ufake nje incazelo emfushane noma inothi ngezansi noma ngaphezulu kokuqukethwe kwakho okuqukethe ulwazi olufanayo futhi kufanele kufakwe kahle.
Ungamisa kanjani ukwaziswa kokuqukethwe?
Uma ungafuni ukuthi noma ubani abele noma akopishe okuqukethwe kwakho kuwebhu, kufanele uthathe izinyathelo ezimbalwa. Okokuqala, kufanele uxhumane nomlawuli wesayithi bese umcela ukuthi ahlahle amakhasi lapho okuqukethwe kwakho kwewebhu kukopishwa khona. Ungamkholisa ukuthi athole lezo zihloko zisuswe ngokushesha.
Uma kungekho zindlela zokuxhumana nomqondisi, kufanele wenze i-Whois Lookup ukuthola ukuthi ubani ophethe lewebhusayithi noma igama lesizinda. Uma engabhaliswanga ngasese, uzothola ikheli le-imeyili lomqondisi kalula. Ngaphandle kwalokho, ungaxhumana ne-GoDaddy noma i-HostGator futhi ubaqaphele ukuthi iwebhusayithi noma igama lesizinda elikulo mbuzo liqhubeka liba okuqukethwe kwakho kuwebhu futhi kufanele lisuswe noma limisiwe ngokushesha.
Okokugcina kodwa hhayi okungenani, ungavakashela i-DMCA. Kumele usebenzise isevisi yayo yokuthatha izithombe ukuze uthole izithombe zakho, amavidiyo, okuthunyelwe kwebhulogi kanye nokuqukethwe kwakho kususiwe. Kukhona amanye ama-plugin we-WordPress afaka amabheji avikelwe e-DMCA, futhi ungayifaka kuwebhusayithi yakho ukuxwayisa abaduni abangase bakwazi futhi amasela.